Vidio abụọ gosiri LG X mach na LG X max | Gam akporosis
LG X mach na X max gosipụtara na vidiyo vidiyo abụọ
E gosipụtara LG X mach na LG X max ugbua n'ọnwa June na ha kwesịrị bịarute oge na ọnwa ole na ole sochirinụ gaa ahịa. Ya mere na atụmanya maka ngwaọrụ abụọ a anaghị ada, onye nrụpụta Korea ewepụtala vidiyo nkwado abụọ na-enye anyị ohere ileba anya na njirimara njirimara nke njedebe abụọ ahụ.
Usoro X a na-abia na ihe doro anya nke oma iji kwado nkparo nke ndi oru ndi choro a ọnụ ya na ihuenyo ka ukwuu ma ọ bụ na ha na-ahọrọ otu na-elekwasị anya ọzọ na foto. Ọ bụ echiche bụ isi nke usoro a na LG agaghị ewepụta ya na anyị ga-ahụ ngwaọrụ ndị ọzọ ga-elekwasị anya na imewe ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ pụrụ iche.
Vidio nkwado mbụ gosipụtara eziokwu ahụ na LG X max na-enye nkwado Oke LTE. 9 3CA, ma ọ bụ nke ahụ pụtara na ọ na-enye ọsọ ọsọ data gafere 400 Mbps. Anyị na-ekwu maka ọdụ nwere Qualcomm Snapdragon mgbawa, 5,5-anụ ọhịa Quad HD ihuenyo na akara mkpisiaka akara aka nke ga-adị na azụ.
Vidio nke abụọ na-akpọrọ anyị LG X max na dịka aha ya na-egosi, ọ bụ ekwentị buru ibu iji nye ihe kachasị mma maka ịkpọ ọdịnaya ọdịnaya. Ọ nwere ihuenyo 5,5-anụ ọhịa, ọ bụ ezie na ọ dara na mkpebi site na ịnwe ihe ọ bụla karịa HD ma ọ bụ 720p mkpebi. A smartphone nke dị na mkpebi ahụ nwere mgbaji quad-core 1.3 GHz na 2 GB nke RAM.
Ka anyị na-echere ịmara ihe ndị ọzọ nkọwa nke njedebe abụọ ahụ, Android 6.0 Marshmallow ọ ga-abụ ụdị sọftụwia ahụ. Ugbu a, a ga-amata ụbọchị mbido maka nke ọ bụla n'ime ha abụọ nwere ike nweta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG X mach na X max gosipụtara na vidiyo vidiyo abụọ
Kedu ihe epupụta na-apụta mgbe anyị nyochara na Pokémon GO pụtara?
Samsung Galaxy Note 7 ga-enwe ọdụ ụgbọ USB Type-C